एसएलसीको कमजोर नतिजा-720311 | Bishow Nath Kharel
एसएलसीको कमजोर नतिजा-720311
Posted on June 26, 2015 by bishownath
Posted by: nayapatrika June 26, 2015 Leaveacomment
गतवर्षको एसएलसी परीक्षामा सहभागीमध्ये ४७.४३ प्रतिशतले मात्र ‘फलामे ढोका’ पार गरे । बाँकी ५२.५७ प्रतिशत परीक्षार्थीको चाहिँ १० देखि १३ वर्षको मिहिनेत लगभग खेर गयो । उनीहरूमध्ये केहीले छिटै सञ्चालन हुने मौका परीक्षामा सहभागी भई आफूलाई उत्तीर्ण गराउनेछन् भने कैयौँले अर्को वर्षसम्मका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रवेशिका परीक्षाको विगत केही वर्षअघिको तथ्यांकलाई नियाल्दा उत्तीर्ण प्रतिशत केही वृद्धि भएको छ । यसपटकको एसएसली परीक्षामा कडाइ गरिएकै कारणले नतिजा कमजोर भएको हो कि भन्ने तर्कवितर्क पनि चलिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार एसएलसी परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन भएकाले पनि नतिजामा उतारचढाव आएको हो । भर्खरै प्रकाशित एसएलसी परीक्षाको नतिजा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा बढी कमजोर देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ जहिल्यै विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून हुने गरेको छ । यो वर्ष ३३ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएको पनिकाले जनाएको छ । गत वर्ष २८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण थिए । सामुदायिक विद्यालयको करिब पाँच प्रतिशत बढी परीक्षार्थी उत्तीर्ण देखिनु संख्यात्मक हिसाबले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) कार्यान्वयन गरी कक्षा १० सम्मको परीक्षा क्षेत्रीय तहमा र कक्षा १२ को परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा बनाउने भनिसकेको छ । त्यसअनुसार सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गर्न नसक्दा यसै वर्षबाट सबै परीक्षार्थीले क्षेत्रीय तहमा कक्षा १० को परीक्षा दिनुपथ्र्यो जुन हुन सकेन ।
देशको शैक्षिकस्तरलाई अवलोकन गर्ने हो भने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाको लगानीमा राज्यले असमानता देखाएको गुनासो छ भने अर्कोतिर परीक्षा प्रणाली पनि यथास्थितिको छ । उच्च शिक्षामा त्रिविलगायतका सरकारी विश्वविद्यालय राज्यको लगानी उच्च माध्यमिकसँग तुलना गर्दा नै स्पष्ट हुन आउँछ । यसर्थ सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई उकास्न सरकारी लगानीलाई समानुपातिक र प्रगतिशील पद्धतिबाट अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । यसैले प्रवेशिका परीक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निजी स्रोतका शिक्षण संस्था अगाडि छन् । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिक, विसंगति छ, विकृति छ । तिनलाई हटाउने प्रभावकारी प्रयास भएकै छैन । खस्कँदो प्रवेशिका परीक्षाको नतिजाले प्रत्येक वर्ष फलामे ढोका साबित गरेर हजारौँ विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको ढोका बन्द गरिदिएको छ ।
प्रवेशिका परीक्षा ८२ वर्षको इतिहासमा उत्तीर्ण प्रतिशतमा केही वृद्धि भए पनि सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ छैन । तर, बालबालिकालाई राष्ट्रले दिने राम्रो शिक्षाका लागि अझ उत्तीर्ण प्रतिशत कसरी बढ्न सक्छ ? त्यो बढाएर शतप्रतिशत उत्तीर्ण हुन पाउनुपर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । अझै असफलताको सूचीमा झन्डै ५३ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । तिनलाई पनि सफलता सिद्ध हुनेछ । यसमा पनिकाले पनि उत्तीर्ण प्रतिशतको बढी तथ्यांक दिए पनि घट्नुको कारण भने दिने गरेको छैन । १०/१२ वर्षको लगानी लगाएर पढाएका आफ्ना बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय हुँदा कुनचाहिँ बाबुआमालाई पिर नलाग्ला र ? परीक्षामा सोधिने प्रश्न कठिन भएको कारणले गर्दा हो कि या शिक्षाको गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीले नपाएर यस्तो हुन गएको हो कि यसमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।